French Southern and Antartic Lands ~ လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်
French Southern and Antartic Lands
Sunday, August 09, 2009 0000 No comments
၇၈။ ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနှင့် အန္တာတိတ်နယ်မြေများ
(Franch Southern And Antartic Lands)
ပင်လယ်ရပ်ခြား ပြင်သစ်ပိုင် နယ်မြေ
၁၈၇၁ တွင် ကျွန်းပေါ်၌ ရက်တို နွားမွေးမြူရေး စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၉ တွင် ပြင်သစ်မိုးလေ၀သ တိုင်းတာရေးစခန်းတစ်ခု တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယနေ့ တိုင်အသုံးပြုလျက်ရှိ၏ ၁၈၉၃ တွင် စိန့်ပေါကျွန်းကို ပြင်သစ်ပိုင်အဖြစ် ကြေငြာခဲ့သည်။ ၁၈၄၃ မှ ၁၉၁၄ အထိ ငါး ဖမ်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာကျွန်းတစ်ကျွန်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၈ တွင် ပုဇွန်ထုပ်စည်သွတ်ဗူး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ၁၉၃၁ ခုနှစ် ကုမ္မဏီ ဒေ၀ါလီခံသောအခါ အလုပ်သမားခုနှစ်ဦး ကျွန်းပေါ်တွင် စွန့်ပစ်ထားခြင်းခံရသည်။ ၁၉၃၄ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရောက်ရှိလာချိန်တွင် နှစ်ဦးသာ အသက်ရှင်လျက်ကျန်ခဲ့သည်။ ခရိုဇက်ကျွန်းများသည် ခရိုဇက် မြေပြန့်လွင်ပြင်မှ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော ကျွန်းစုကြီးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ခရိုဇက်ကျွန်းများကို အဓိကအားဖြင့် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားနိုင်သည်။ အောက်(စ်)ခိုခွန်ကျွန်း ၊ အပေါ်ထရီကျွန်းငယ်များ ၊ ပင်ဂိုအင်ကျွန်း ၊ဘရစ်ခန့် ဒီအယ်ဟီးရိုးအင်း သန္တာကျောက်တန်းများ ပါဝင်သော အယ်အော့ ဆီဒန်တယ် (အနောက်) ပိုင်းနှင့် ဒီအက်(စ်) ကျွန်း ဒီလာပိုဆက်ရှင်းကျွန်းတို့ပါဝင်သော အယ်အောရီယန်တယ် (အရှေ့) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ၁၇၇၂ တွင် ပြင်သစ်က ၎င်းကျွန်းများကို တွေ့ရှိပြီး ပိုင်နက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ပင်လယ်ဖျံဖမ်းခြင်းနှင့် ဝေလငါး ဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။ မူလက မာဒါကာစတာ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိခဲ့ပြီး ၁၉၅၅ တွင် (TAAF) ၏ နယ်မြေအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကာဂူလင်းကျွန်းများကို ၁၇၇၂ တွင် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ကျွန်းကြီးတစ်ကျွန်းနှင့် ကျွန်းငယ် ၃၀၀ ခန့်ပါဝင်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင် ၅၀ မှ ၁၀၀ ခန့် ပါဝင်သော စူးစမ်း လေ့လာရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် ကျွန်းပေါ်ရှိ အော့(စ်) ဖရန်စစ် ကျွန်းတွင် အမြဲနေထိုင်လျက်ရှိသည်။ အက်ဒီ လိုင်းနယ်မြေသည် (TAAF) ၏ တစ်ခုတည်းသော တီးတည် မတည်ရှိသော နယ်မြေဖြစ်ပြီး အန္တာတိတ်ဒေသ အတွင်းပါဝင်သည်။ ၎င်းကိုအမေရိကန် အစိုးရက ပြင်သစ်ပိုင်အဖြစ် အသိအမှတ်မပြုချေ။ ဘက်ဆက်ဒါအင်ဒီယား ထုံးအိုင်ပေါက်သန္တာကျွန်းကို ၁၈၉၂ ခုနှစ် ကတည်းက ပြင်သစ်က ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ သန္တာကျောက်တန်းများဖြင့် ၀န်းရံလျက်ရှိသော မီးတောင်ကျောက်ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်ပြီး ဒီရေမြင့်တက်လာချိန်တွင် ရေလွှမ်းလေ့ရှိသည်။
ဥရောပကျွန်းသည် သစ်ပင်ထူထပ်သော ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်ပြီး ၁၈၉၇ ခုနှစ် ကတည်းက ပြင်သစ်က ပိုင်ဆိုင် ခဲ့သည်။ ကျွန်းစောင့်တပ်ငယ်တစ်ခု ချထားပြီး မိုးလေ၀သ လေ့လာရေးစခန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိသည်။ ဂလိုရီရိုဆို ကျွန်းများတွင် အသီးအနှံပေါကြွယ်ဝသော သန္တာကျွန်းနှစ်ကျွန်းနှင့် ကျောက်ဆိုင် ကျွန်းသုံးကျွန်းပါဝင်သည် ၁၈၉၂ ခုနှစ် ကတည်းက ပြင်သစ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ ဂလိုရီးယု ကျွန်းပေါ်တွင် ကျွန်းစောင့် တပ်တစ်ခုရှိပြီး မိုးလေ၀သနှင့် ရေဒီယိုစခန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဟွန်ဒီနိုဗာ ကျွန်းကို ၁၅ ရာစု အတွင်းက ကျော်ကြားသော စပိန်ရေကြောင်းစွန့်စားရှာဖွေသူ တစ်ဦး၏အမည်ကို အစွဲပြုမှည့်ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၁၈၉၇ ခုနှစ်ကတည်းက ပြင်သစ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ မြေဩဇာ အဖြစ်သုံးသော ပင်လယ်ငှက်ချေးနှင့် ဖေါ့စဖိတ် ရှာဖွေရန် ကျွန်းပေါ်သို့ သွားရောက်ကြသည်။ လက်ရှိတွင် ကျွန်းစောင့်တပ်ငယ် တစ်တပ်မှ မိုးလေ၀သနှင့် ဇလ ဗေဒစခန်းတစ်ခုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရှိသည်။ ထရိုမယ်လင် ကျွန်းကို ၁၇၇၆ တွင် ပြင်သစ်က ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၁၈၁၄ တွင် ရီယူနီယံကျွန်း၏ တရားစီရင်ရေးအောက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် ပင်လယ်လိပ်ကြီးများ ဘေးမဲ့နယ်မြေ အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး အရေးကြီးသော မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒ စခန်း တစ်ခု ထားရှိသည်။
အာဖရိကတိုက် အရှေ့ဘက်။ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်း ရှိကျွန်းများ ၊ အချို့ကျွန်းများသည် မာဒါကာစတာ အနီးတွင်ရှိပြီး အချို့မှာ အာဖရိက၊ အန္တာတိတ်နှင့် ဩစတြေးလျတိုက်များတွင် အကွာအဝေး အချိုးညီစွာ တည်ရှိသည်။
အာန္တာတိက ဒေသ။ အာဖရိက။
အမ်စတာဒမ် ကျွန်း ။
ကုန်းမြေ - 55 sq km
ရေ -0sq km
စုစုပေါင်း - 55 sq km
ကုန်းမြေ -7sq km
စုစုပေါင်း -7sq km
ကုန်းမြေ - 352 sq km
စုစုပေါင်း - 352 sq km
ကုန်းမြေ - 7,215 sq km
စုစုပေါင်း - 7,125 sq km
ဘက်ဆက်ဒါအိန္ဒိယ (အက်ပါဆက် ကျွန်းများ)
ကုန်းမြေ - 0.2 sq km
(ထုံးအိုင်) ရေ - 79.8 sq km
စုစုပေါင်း - 80.0 sq km
ဥရောပ ကျွန်း (အက်ပါဆက်ကျွန်းများ )
ကုန်းမြေ - 28sq km
စုစုပေါင်း - 28 sq km
ကုန်းမြေ -5sq km
စုစုပေါင်း -5sq km
ကုန်းမြေ - 44 sq km
စုစုပေါင်း - 4.4 sq km
ကုန်းမြေ - 1 sq km
စုစုပေါင်း - 1 sq km
အမ်စတာဒမ် - 28 km
ကာဂူလင်ကျွန်းများ - 2,800 km
ဘက်ဆက်ဒါအိန္ဒိယ - 35.2 km
ဥရောပ ကျွန်း - 22.2 km
ဂလိုရီရိုဘိုကျွန်းများ - 35.2 km
ဟွန်ဒီနိုဗာကျွန်း - 42.1 km
ထရိုမယ်လင်ကျွန်း - 3.7 km
အမ်စတာဒမ် နှင့် စိန့်ပေါ - အနောက်လေအမြဲတိုက်ပြီး စိုထိုင်း ဆမြင့်မားသော သမုဒ္ဒရာပိုင်း ရာသီဥတု။
ခရိုဇက်ကျွန်းများ = လေထန် ၊ အေးမြ ၊ စိုစွတ် ၊ တိမ်ထူ ။ကာဂူလင်ကျွန်းများ = သမုဒ္ဒရာပိုင်းရာသီဥတု ။ အေးမြ ၊ အုံ့မှိုင်း ၊ လေထန်။ အက်ပါဆက်ကျွန်းများ = အပူပိုင်းဒေသရာသီဥတု။
အမ်စတာဒမ် = မီးတောင်ကျွန်းဖြစ်ပြီး မတ်စောက်သော ကမ်းရိုးတန်းကမ်းပါးပြတ်များရှိ။ မီးတောင်၏ အလယ် ပိုင်းကြမ်းပြင်သည်ကြီးမားကျယ်ပြန့်သောမြေပြန့်ဖြစ်၏ စိန့်ပေါ = သုံးမြှောင့်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိ။ မီးတောင်၏အထွဋ်ပိုင်း ဖြစ်။ အရှေဘက်ခြမ်းတွင်ကျောက်စိုင်ထူထပ်သော မတ်စောက်ကမ်းပါးများရှိ။ ရေပူစမ်းများစိမ့်ထွက်လျက်ရှိ။ ခရိုဇက်ကျွန်းများ = ခရိုဇက် လွင်ပြင်မှဖြစ်လာသော ကျွန်းစုဖြစ်၍ ကျွန်းအုပ်စု နှစ်စု ခွဲထား။ကာဂူလင်ကျွန်းများ = ကာဂူလင်ကျွန်း၏ အတွင်းပိုင်းတွင် မြင့်မားသောတောင်များနှင့် ကြမ်းတမ်းသောမျက်နှာ သွင်ပြင်ရှိ။ တောင်ကုန်း များ တောင်ကြားများ နှင့် မြေပြန့်များရှိပြီး ကမ်းခြေမှ ကျွန်းဆွယ်များတိုးထွက်လျက်ရှိ။ ဘက်ဆက်ဒါအိန္ဒိယ = ထုံးအိုင်ပေါက်သန္တာကျောက်ကျွန်း ၊ ဒီရေမြင့်တက်ချိန် ရေလွှမ်းမိုး ၊ (၁၅) မီတာအနက်ရှိ ထုံးရေအိုင်။ဥရောပကျွန်း ၊ဂလိုရီရိုဆိုကျွန်းများ ၊၊ ဟွန်ဒီနိုဗာကျွန်း = နိမ့်၍ပြန့်ပြူးညီညာ ၊ သဲသောင်ထူ။ ထရို မယ်လင်ကျွန်း = နိမ့်၍ပြန့်ပြူးညီညာ၊သဲသောင်ထူ။ မီးတောင်ထိပ်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိ။
အနိမ့်ဆုံးအပိုင်း အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ -0m
အမြင့်ဆုံးအပိုင်း အမ်စတာဒမ်ကျွန်းပေါ်ရှိ ဒီလာဒိုက်တောင် - 867 m
ငါး ၊ ကျောက်ပုဇွန် ။ ဂလိုရီရိုဆိုကျွန်းများနှင့် ထရိုမယ်လင်ကျွန်း ပေါ်တွင် ပင်လယ်ငှက်ချေး ၊
ဖေါ့စဖိတ် နှင့် အုန်းသီး များထွက်ရှိ။
ကျွန်းစောင့်တပ်များ ၊ သုတေသနပြုသိပ္ပံပညာရှင်များမှလွှဲ၍အခြေချနေထိုင်သူမရှိ။
Posted in: ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ
Basic Political Science Part (5)
အခန်း(၅) နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်နှင့် သဘောတရားများ အပိုင်း (၂) ကိုယ်ကျင့်တရားပညာ ကွန်ဖြူးရှပ်၏၀ါဒတွင် ... ကိုယ်ကျင့်တရားများကို ... အခြေခံ၍ ...
Basic Political Science Part (4)
အခန်း(၄) နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်နှင့် သဘောတရားများ အပိုင်း (၁) တည်ထောင်သူ - Kong Fu Tzu(孔夫子) အမည် - Kung Qiu,(…)or Kung Chin or Master Kung ...
The Changing of International Policies and Policies of should appraisal again
ပြောင်းလဲနေသော နိုင်ငံတကာ မူဝါဒများနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သော မူဝါများ
၇၀။ အက်စတိုးနီးယား (Estonia) နောက်ခံသမိုင်း အကျဉ်း ဒိန်းမတ်၊ဆွီဒင်၊ ဂျာမန်နှင့် ရုရှတို့ရှိ၏ ကိုလိုနီ နိုင်ငံအဖြစ် ရာစုနှစ်များစွာ နေထိုင...
Basic Political Science Part (3)
အခန်း (၃) International Political Systems Form of Governments 1. Anarchism မင်းမဲ့ဝါဒ 2. Aristocracy (The rule by the Best) အကောင်းဆုံးလူမ...
Political Science Part (1)
နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာ အပိုင်း (၁) အခြေခံနိုင်ငံရေး သိပ္ပံအား တင်ပြသွားပြီးဖြစ်၍ ယခုမှစ၍ အဆင့်မြင့် နိုင်ငံရေး သိပ္ပံအား တင်ဆက်ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်...